हवाई उडान र विद्यालय भर्ना के हुन्छ? सिसिएमसी अनिर्णित – AayoMail
हवाई उडान र विद्यालय भर्ना के हुन्छ? सिसिएमसी अनिर्णित
आयाेमेल संवाददाता २०७७ साउन २५ गते २०:४०
भदौ १ गतेदेखि सञ्चालन हुने भनिएको हवाई उडान र विद्यालय भर्नाका विषयमा नयाँ सिफारिस गर्न सक्ने ठानिएको कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) को आइतबार साँझको बैठक अनिर्णित भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को साउन ५ गतेको बैठकले ६ गते मध्यरातिदेखि लकडाउन अन्त्य गरेको थियो। तर, त्यसयता काठमाडौं उपत्यकासहित तराई केन्द्रित जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ कदम चाल्ने ठानिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक सोमबार बस्छ।
तर, त्यसको अघिल्लो दिन बसेको सिसिएमसीको बैठकले कोरोना संक्रमितको संख्या बढेको, लक्षण भएका बिरामीको संख्या बढेको र मृत्युदरमा बृद्धि भएकोबारे समिक्षा गर्नु बाहेक कुनै ठोस निर्णय गरेन।
जबकि, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले हवाई उडान, विद्यालय भर्ना लगायतका विषयमा सिसिएमसीबाट सिफारिस हुने र मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुने बताएका थिए।
तर, सिसिएमसीको आइतबार साँझको बैठक पश्चात पत्रकारलाई संक्षिप्त जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले बैठकले स्थिति विश्लेषण गरे पनि मन्त्रिपरिषद्का लागि सिफारिसको कुनै निर्णय नभएको बताए।
बरु आवश्यक निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नै लिने उनले उल्लेख गरे।
जबकि, यसअघि सिसिएमसीको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिने गरेको थियो।
सिसिएमसी बैठकले देशभरी आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन अभाव देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।